Oromiyaa: Rakkoo nageenyaa Asallaatin shakkamtoonni 39 fi meeshaaleen waraanaa qabamaniiru Kichuu
HomeAfaan OromooNewsOromiyaa: Rakkoo nageenyaa Asallaatin shakkamtoonni 39 fi meeshaaleen waraanaa qabamaniiru
( BDHKMNO Fulbaana 13/2011)-Rakkoo nageenyaa tibbana magaalaa Asallaatti uumameen shakkamtoonni 39 too’annoo jala oolan.
Waajjirri Bulchiinsaa fi Nageenyaa Magaalaa Asallaa akka beeksisetti, shakkamtoota 39n keessaa dhimmi 31 poolisiidhan qoratamee mana murtiitin hordofamaa jira.
Itti gaafatamaan waajjirichaa obbo Shamsaddiin Mohaammad akka jedhanitti, shakkamtootarratti beellamni guyyoota 14 gaafatameera.
Namoota shakkaman 8 irratti immoo ragaan dabalataa irratti qulqulleeffamaa jira.
Humni nageenyaa sakattoo taasiseen meeshaan woraanaa seeraan alaa Mintoofiin 2, PHS 1 fi shugguxiin 2 too’annoo jala oolera.
Magaalichatti rakkoon akka hin mudannee fi nageenyi waaran akka mirkanaa’u jiraattota waliin hojjetamaa akka jirus eerameera.Maddi:fbc
Iccitii Rakkina Obbo Lammaa magarsaa
Kamaal Aloo Gr
Hanga feenellee woljaalannu dhugaa wolitti hamaa deemna.Kun ammoo badii hin qabu.
Obbo lammaan nama keenna hedduu tokko jaalannuuf jabaja guddaas kenninuuf keessaa
nama tokkoodha.Nama keenna jabaa waan ta’eef qofa osoo hin taane alagaanuu nurra jaalalaaf kabajaa isaa leellisee dhakaaf mukni isaaniituu lammaa lammaa jechuu tureera.
Dhiheenya gaafa bulchiinsi obbo lammaa magaala finfinneerraa buqqa’uu qaba jettee ilmaan abashaa fiigderraa as diinni faaruu san hunda garagalchee lammaa abaaruutti jira.
Hardha ammoo akka seeraaf dhihaatee obbo lammaa magarsaa nuuf gaafatamu jechuu afaan baasanii yoo dubbatan argine.sababa maleedhaa miti jechuus hubanneerra.
Badiin obbo Lammaa magarsaa :-
Muldhata isaa gaafa argite irraa ilmaan diinaa isa hawattee itoophiyaa qofaaf akka uf kennu yaalaa akka turte namuutuu argaa ture.
Faaruu gootummaaf hayyummaadhaa jarri isaan hin dhaadin hin jiru ture jechuu mallas.
Iddoo hundatti badhaasa garagaraafi akka jabaa nama isaaniitti beekkamtii isaaf kennan manni haa lakkaawu jennee dhiisna. Kun hunduu akka jaalatame jedhee maqaaf faarfamuu barbaacha toophiyummaa saba oromoodhaatiif dhukkuba taatu san qofa wojjiin baadhatee akka oromootti dugda kennu irraa waan barbaadaniif qofa ture jedhuudha. Obbo Lammaa magarsaa garuu faaruuf maqaa isaan ittiin isaaf sirban san hunda hanga xurii qeensaattuu herregee argamuufii dhabe.
Inumaayyuu beekkumsaaf lubbuu kennuu biraan oromummaaf sabboonummaa herreega hinqabne takkaan saba ufii jaaree argamuufi gammachuu gaafa hayyoonni akka jawar fi dhaabbileen sabaa alaa galan isarraa gadi bahee muldhatetu obbo lammaa biraa diinatti as fullaafame.Yaalii ijibbaataatiifis dhihoo kana badhaasa nama gaarii bara kanaa jedhu worri ESAT maqaa obbo lammaa magarsaatiin baasee hafarsaa ture.kanaafis gammadee iddoo kennee yoo fiigu arguu dhaban. Eda’ama kana undaatiin ammoo maqaa balleessuu yaaluufi jibbaaf himata irratti oofuu eegalaniiru.Oromoon ammoo nama ija sabaa ta’e kan akka obbo lammaa magarsaa kana dhiisiitii osoo goobanni daacceetuu amma boollaa baheetiin diinnni kan itti roorrisu taatee badii kaleessaatiif ufii gaafata malee diinaaf abadan sadarkaa carraa hin kennine bira gahee jira.Dhaabboleen oromoo hundi kana beekanii qaawwa diinni jidduu isaanii galuun hunda cufatanii wol kabachiisuudha qabu.
Umriin hayyootaaf goototaa haa lalisu.
Barri diinni carraa nutti argatus dabreera.
Kabajaaf jaalalatu obbo lammaan mala.
Hayyoota keenyarraa diina haa qolannu.